Gubata mar’immaan ofii kan qabbaneessu cuunfaa qabsoo haqaati. | QEERROO
Har’a rakkoon hammaataan nu quunnamee jira. Ijji Oromoo imimmaaniin guyyaa mara bololi’ee dhiqamaa oola. Nyaarri harmee keenyaa gadadoo gaddaan irraa buqqaa’ee dhumuurra ga’eera. Harmeetu rakkinaaf rakkachuurra qabeenya isheef rakkattee rakkattuu cuulxoftuu fakkaatte. Imimmaantu irraa qooruu fagaate. Garaatu boonbaa’aa oola. Tokko awwaaltee galtee manaas du’ee boossi. Mar’immaan Harmeetu madaadha, mar’immaan keenyatu gubataadha. Gubataa mar’immaan ofii kan qabbaneessu cuunfaa qabsoo haqaati.
Cuunfaan dhugaatii gubataa garaa qabbaneessudha. Cuunfaan Habukaadoo, Maangoo, Burtukaana, paappayyaa irraa tolfama. Dhugaatii qabbaneessaadha. Cuunfaan yaaltuu garaa gubataati. Yeroo kamuu namni dhibee garaachaa qabu Cuunfaa fayyadamuun nageenya isaa sarbame bakkatti akka deebi’u nii gargaara.
Cuunfaan qabsoo haqaa qabsaa’ota haqaa haqaan haqa barbaaduuf dirree qabsoo jiraniif qabsaa’ota haqaa haqa uummataa addunyaaf lallabuuf sagalee isaanii addunyaatti dhageessisan isaan afaan Qawwee dhaabuu dadhabe Qeerroo Bilisummaa irraa madda. Cuunfaan qabaoo haqaa garaacha gubataa,qabaneessa. Cuunfaan qabsoo haqaa ija boohichaaf arguu dhaba dimimmiste saaqee agartuun akka waan egereef mul’ataa argu kan gargaarudha. Cuunfaa qabsoo haqaa humna uddeellaa halagaa saggoorraa nama qoorbaasisee ba’aa garbummaa namarraa lafaan dhahudha. Mogolee imala dheeraa, luka damdamattuu gufuu qabsoo, obsituu jireenya gadadoo kan jabeessee hawwiif akeeka isaa biraan ga’u cuunfaa qabsoo haqaati. Kanaaf cuunfaan qabsoo haqaa nu barbaachisa.
Har’a gununiituu namaa ta’uu hinqabnu. Ilma Booree ilma Xiiqii ilma gumaa baasu ta’uu dandaa’uudhaa qabna. Ijji keenya qaama biraa hawwuu, qaama biraa fagootti abdachuun ofii taa’uuf of kaadhimuu hinqabu. Dirqmaa isaa qaamni kamuu bahachuu qaba. Dirqmaani Bilisummaan sirraa barbaadu kamiin bahadhu. Waan dandeessuun qabsoo tumsi. Waan siif mijateen qabsoo uummataa fuulduratti dhiibuu shaakali. “Harreeyyuu hinqabdu Farda namaan ” Chee” jetti” jedha Oromoon. Qaama Bilisummaa keef ifaajaa jiru kamiin komachuu, abaaruun sirra hinjiraatu. Yoo dandeesse qaama sana deggaruu, qaama sana tumsuu. Yoo hindandeenyemmoo callistee ilaaluun kees wayya. Har’aa dhaloota 3 Oromoon horateera.
1, Dhaloota Kutatoo
2, Dhaloota Komatoo
3, Dhaloota Gaggalagalaa
Egereen Oromoo dhaloota kana keessatti dubbifama. Gaafa fuula dhaloota kutatoo ilalaan gammachuuti nama birqaansa. Fuulli isaanillee fuula abdiiti.warra muratoo addunyaa kanarratti gammachuu saba Oromoo bulanii ka’anii hawwan. Ilmaan qabsoo haqaa Bilisummaa Oromiyaatti amananidha. Isaan kun hedduun isaanii ilmaan Oromoo humnaaf qabeenya ittiin qabsoo tumsan hinqabnedha. Warra ganamaa galgala madaan uummata isaanii keessa isaanii waadee waxaludha. Qabeenyaan qabsoo kana tumsanii meeshaa gurguddaa bitanii utuu WBO hidhachiisanii warra dheebotoodha. Akkasuma deemanii dirree Leenjii dhaqanii dhukaasaa baratanii diina Uummata isaanii utuu konkolaachiisuu danda’anii addunyaan kun isaan gammachiifti. Ta’ullee Dhalootni kunneen hanqina Maallaqaaf, hanqina humnaaf akka yaadanitti qabsoo sabaa shaffisiisuu hindandeenye. Ta’us “Hanga fiigan susukkuu, hanga taa’an quphanuu” Akka Sareen jette. Ta’aa hinjiran. Rafaa hinjiran. Tooftaaf tarsiimoo qabsoo guyyaa gara guyyaatti jijjiirrataa humna afaan qawween socho’u dura sodaaf yaaddoo tokko malee dhaabbatanii falmaa jiru.
Dhaloonni kutatoon kun qareeyyii kitaabolee seenaa Oromoo qaban hedduu qorataa oolanidha. Akkasuma warra aadaaf seenaa uummata Oromoo haalaan gadfageessanii qorataa oolanidha. Dhalootni kun biyya Xoophiiyaa jedhamtu utuu hintaane biyya Oromiyaa jedhamtu warra arguu barbaadudha. Dhalootaa aadaaf seenaa uummataa barbadaa’uurra ga’e qorachuun addunyaaf illee ragaa qabatamaa document godhuun olkaahuu irratti argamanidha. Qabsoo Bilisummaa Oromoo kanatti waan dandaa’aniin akka dandaa’anitti makamanii duukaa qabsaa’aa jiru. Waan hanqina qabsoo warra lallabuu fedhurra warra qaa’aa qabsoo saba Oromoo keessaa cuqqaaluuf tattaafataa ooludha. Dhaloota qabsaa’ota kaleessaa galateeffatuuf dhaloota xiiqaa’oo nutis akkuma jaallan kaleessaa qabsoo uummataa kana haalaan fardeessuu qabna jedhanii amanannidha. Ilmaan Oromoo qareeyyii kanaan Dhaloota kutatoo jechuu dandeenya.
Dhaloota har’aa keessaa parsantaan muraasni dhaloota komatoodha. Dhaloonni kun ciminas qabu. Laafinas hedduu qabu. Ciminni dhaloota kanaa, Seenaaf Duudhaa Oromoo hanga tokko warra beekudha. Akkasuma ciminni dhaloota kanaa uummanni kun afaan Qawween ala bilisummaa argachuu akka hindandeenye kan beeku keessa jira. Faallaa isaaniis dhalootuma kana keessa, kanneen qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf dhaloota kana burjaajessaa oolan hangafa isaanii ta’anii fuudhanii adeemaa jiru.
Dhaloonni kun bilchachuu qaba. Bilchaachuu baannan waan karaa dhaloota kanaa dhufuuf deemu garbummaa hamtuu keessa bahuu hindandeenyedha. Komeen dhaloota kanaa yeroo hedduu ABO irrattidha. WBO’n maaf dhufee waraanuu dhiise, maaf ajjeesuu dhiise, maaf mul’achuu didaadha. Waan komatan kana duuchuu hinbarbadan. Qa’aa Argan duuchuurra Qa’aa sana bal’isuuf warra quba itti dha’udha. Qabsoo Bilisummaaf godhamu keessatti qooda utuu hinba’atin warra Bilisummaa barbaadudha.
ABO keessatti gumaata isaanirraa barbaadamu utuu hinbaa’atin komachuuf warra hiixatudha. Isaan kun dhaloota komatoo, waa hojjechuurra waan hojjetame bishaanitti naquuf socho’anidha. Gariin isaanii ammayyuu waan qabsoo kun ifa waan hinta’iniif quba isaanii dhaaba ABO tti qabaa oolu. Jaroota kanaan warra Komatoo jedheeraan
“Namni seenaa isaa hinbeekne bishaan gabateerraati, gara argetti jallata” J/Eebbisaa Addunyaa jedhe, Ekeraan isaa Booka haa dhugdu
Jarootni kun qabsoo gochaa jirruuf hedduu warra danqaa ta’edha. Dhaloonni kun fakkeenya kubbaa Miillaati. Kubbaa Miillaa abbaa qilleensa guutetu dhiitee ittiin bohaara. Abbaan fedhe abbaan humna qabu qilleensa itti guutuu dandeenyaan kubbaa kana dhiitee ittiin taphataa oola.
Dhaloota gaggalagaloo Kanas nama oduun isaan guutu maratu akka kubbaatti asii achi dhiitaa oola. Dhaloonni kun hedduun dhaloota fb horatedha. Dhalootni kun dafee beekumsa gahaa argachuu baannan egeree Oromoo kan balleessuuf, Oromiyaa barnadeessuu keessatti qooda jabaa bahachuu malu. Dhaloonni kun dhaloota miidiyaatis. Dhaloonni kun kaayyoo qabsaa’aniif hinbeekan jechuu dandeenya. Garuu; waan gaariin Oromoof ta’uu nii jaallatu. Yeroo kamuu TV akkasuma Live Video jala ta’aa warra ooludha. Waan hojjetamurra warra waan dubbatamun baraqanudha. Dhaloonni kun har’a Tolaan haalaan dubbateera taanan “Tolaan keessakooti” jedhu. Kaleessa Goobanaan Yakkamaa ta’ee har’a arrabaan bakka dhibee uummataa subbataa jira taanaan, Goobanaan Qeerroo hedduu hiisisee ajjeesaa tureera har’ammoo qabsoon keenya jechuun waan uummanni barbaadu yoo afaaniin dubbate “Goobanaan Goota Keenya” dhaloota jedhudha.
Walumaa gala fuuldurri dhaloota kanaa dukkana. Dhaloota of hinbeekneef seenaa hinqorannedha jechuun dandeenya. Dhaloonni kun guyyaatti shaniif shantama naannaa’aa oolu. Irra jireessa dhaloota dhiichisa sirbaan baraqanudha. Dhaloota kana bilcheeffachuun dirqama Oromoo maraati.